Ho tonga ao Linux ny fanafoanana ny planeta. | Avy amin'ny Linux
Ho tonga ao Linux ny fanafoanana ny planeta.
Nandeha an-tongotra tany Diaspora * aho androany maraina ary tsapako fa napetrak'izy ireo ity vaovao ity ... «Fanafoanana ny planeta mankanesa ao amin'ny Linux 'ary nanao fikarohana aho.
Tsapako fa RTS tena mahaliana izy io, miaraka amin'ireo foto-kevitra izay fantatsika rehetra amin'ny ankapobeny fa manana ny mampiavaka azy ny fananana karazan-javatra vaovao rehetra.
Orinasa fanombohana no mampandeha ny lalao, Uber Entertainment, orinasam-pilalaovana fanombohana izay nisafidy ny hampiasa Kickstarter ho toy ny pad fandefasana ary nanamafy ny tenany fa ho tonga amin'ny Linux ny lalao, fa tsy ho mora izany fa hanao izy ireo.
Ity ny porofo:
Niresaka ianao, nihaino izahay; Voamarina ny fanohanan'ny Linux. Tsy tanjona kendrena io. Manohana azy io avy hatrany ao amin'ny
Ary mitohy hatrany io, toa efa manomboka milatsaka amin'ny Linux ny lalao, maninona? Tsy hametraka ny tenako amin'ny hafanana amin'ny famakafakana ny antony izao aho satria tokony hanana hevitra ny rehetra izao; Ny hakanton'izany rehetra izany dia manomboka mipoitra ny fivoarana nefa tsy mila renivohitra lehibe, manomboka mahita isika fa ny indies dia tena mamorona zavatra tsara sy avo lenta ary mila manohana azy ireo isika; Tsy manana fidirana dolara aho fa manomboka eto dia manome lanja kely aho hanampiana ilay tetikasa.
Ny 14 septambra amin'ity taona ity dia mifarana ny fanomezana dia efa nanangona $ 511,644 izy ireo, 25 andro sisa ary mila 900,000 izy ireo; betsaka eny, fa mijery ny kalitaon'ny lalao sy ny maha olon-tiana mafy RTS anao, wow tsy afaka miandry azy hivoaka sy hijery ny fomba hividianana ny lalao.
PS: ny lalao dia tsy ho maimaim-poana na maimaim-poana, saingy tsy mampihena ny fahamendrehany izany.
Avelako ho anao ny horonantsary Kickstarter ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Ho tonga ao Linux ny fanafoanana ny planeta.
Toa tsara ilay video !!!! Saingy holazaiko fa ankoatry ny fananan'ny Starcraft dia itovizany amin'ny ampahany stratejika "ny faritry ny foko sy ny firenena" ao amin'ny Spore
Raha ny filazan'izy ireo manokana, ny lalao dia aingam-panahy avy amin'ny "Total Annihilation".
Satria resaka lalao no resahina…. ary azafady ny offtopic fa…. misy hevitra aiza ahazoana ny lalao CrossOver ??
dia hoe avela hitondra WoW Cataclysm aho tato ho ato ary te-"hikorontana kely"
Mystog @ N dia hoy izy:
Tsy fantatro izany lalao izany, fa amin'ny sary dia mamela anao hanandrana StarCraft sy ireo terany.
Neji raha mahazo ny hazofijaliana ianao dia tsy raharahako na mipetraka any Mesopotamia ianao fa ho hitako. Mandra-pahatongako manana DoTA sy WoW amin'ny PC-nao dia tsy hijanona aho !!
Mamaly an'i Mystog @ N
Afaka naka ny CrossOver aho Cross
Nekos @ C dia hoy izy:
Ny orinasa boribory, mangataka fanomezana ho fampandrosoana azy ireo izy ireo ary avy eo tsy maimaim-poana na tsy andoavam-bola… ..o ny ambin'ireo mpandraharaha dia tena adala na hendry be… Haka tahaka ny maodelin'izy ireo amin'ny fanomezana aho mamorona zavatra ary avy eo dia ampandoaviko vola ny tadiavin'izy ireo hahahaha
Valiny tamin'i Nekos @ C
Raha ny marina, izay omenao dia averina amin'ny fanomezana, ny lalao ho fampidinana dia mitentina $ 20 raha tadidiko tsara ary raha manome $ 20 ianao dia tsy avelany hisintona azy maimaim-poana fotsiny ianao, fa manome zavatra fanampiny koa ao amin'ilay lalao
Midera anao Gaara !! Haha, Eny, eto aho vao nahita crossover fa ho an'ny 64 bits, ary ny ubuntu izay efa napetrako sy namboariko dia 32 bit, raha azonao atao ny misintona kinova ho an'ny 32 ary apetrakao ao amin'ny fampidiran'ny club tanora ny tenako (ary fantatro fa mpiray tanindrazana an'arivony maro hafa) hankasitraka mandrakizay isika!
Kasiho! Fa raha ny tokony ho izy… milalao Warcraft, Startcraft ary Diablo 1.10 amin'ny PC an-tranoko miaraka amin'i Debian sy WINE aho. Indray mandeha aho dia nilalao WoW niaraka tamin'i Gentoo sy Crossover ...
OT: Neji, ahoana no ahalalako ny mailakao?
Raha tianao dia haparitako aminy ny mailakao amin'ny alàlan'ny mailaka, na amin'ny IRC na FB.
Ras dia hoy izy:
"Tsy manana fidirana dolara aho", hahahaha xD tena tsara, mahaliana ny lalao na dia tsy hovidiko aza. Ao amin'ny Linux, ny lalao amin'ity karazana ity miaraka amin'ny motera lohataona dia mahaliana, na dia tsy manana fanindriana farany tsara aza izy ireo.
Daniel Rojas dia hoy izy:
Nano avy any Arzantina ve ianao? Manontany momba ny dolara aho haha
Valiny tamin'i Daniel Rojas
Avy any Venezoela.
Any Arzantina dia manana an'io olana io koa O_O
Mijanona miaraka amin'ny starcraft aho na miaraka amin'i AOE amin'ny divay hahaha
Tsy mitovy izy ireo, koa, tsy misy toa ny lalao teratany xD
Eny, tiako ny hahita ilay L4D2 teratany ho an'ny Linux misy fahombiazana ambony noho ny kinova Windows, izay noresahina betsaka (raha ny tena tsy hitako tamin'ny sehatra rehetra), tsara raha misy zavatra hafa hilalaovana an'io dia tsy openarena sy ireo fanta-daza hafa ary eo amboniny dia misy sary izay tena nanararaotra ny fitaovana sy ny fiasan'ireo mpanafaingana vaovao, toy ny tesselation. Tiako be ny AOE, (Starcraft tsy dia be loatra), fa ny lalao paikady dia mitaky fotoana fohy, ka aleoko zavatra misy tantara fa afaka mankafy mandritra ny 30 minitra indray mandeha. Misy tolo-kevitra ve?
Tsy misy mistery ny anton'ity raharaha ity, mpamorona indie izy ireo, izay nahazo famatsiam-bola avy amina olona izay azo antoka fa maro ny olona nanontany / naneho hevitra momba io lohahevitra io; ka toy ny voajanahary amin'ireto tranga ireto (rehefa tsy misy mpanjifa) "mihaino" an'ireo mpanjifa mety ho avy izy ireo.
Efa ho tapitra ny kinova 1.0 an'ny lohahevitra FromLinux vaovao
Firefox OS amin'ny Raspeberry Pi